Weeraro Askar Badan Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho. – Calamada.com
Weeraro Askar Badan Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
calamada May 12, 2018 2 min read
Weeraradani Qaraxyada ah oo ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magaalada Muqdisho ayaa la eegtay Maleeshiyaad ka tirsanaa Kooxda Ridada Somaliya gaar ahaan kuwooda loogu yeero Xasilinta , kuwaasi oo ku sugnaa xiliga Qaraxa uu dhacayay deegaankaasi.
Qaraxyada oo ahaa ilaa 2 Qarax oo is xigxiga ayaa kan koobaad waxa uu dhacay xili ay Maleeshiyaadka ku sugnaayeen goob ka tirsan deegaanka Ceelasha Biyaha, Iyadoona Qaraxa labaadna uu ka dhacay isla goobta xili Murtadiinta ay ku mashquul sanaayeen uruurinta meydadka iyo dhaawaca ka dhashay Qaraxii koowaad .
Wararka ayaa sheegaya in Qaraxii danbe uu sababay Khasaaro xooggan oo soo gaaray Maleeshiyaadka Murtadiinta ee la beegsaday.
Inta la xaqiijiyay ilaa 9 ka tirsan Maleeshiyaadka Ridada ayaa ku dhimatay labada Qarax halka dhaawacana uu gaarayo ilaa 7 ka tirsan Murtadiinta .
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ay arkayeen meydadka iyo dhaawaca Murtadiinta oo goobta laga daabulayo , Iyadoona xiligaasna ay halkaasi isku gadaameen Maleeshiyaadka si ay u qariyaa khasaaraha soo gaaray .
Qaraxyada ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa ku soo aadaya xili maalin ka hor wadada isku xirta magaalooyinka Afgooye, iyo Wallaweyn uu ka dhacay Qarax lala eegtay gaari nuuca Cabdi billaha loo yaqaanno oo ku socdaalayay wadadaasi kaasi oo ay saarnaayeen Maleeshiyaad Murtadiinta ah .
Qaraxaasi ayaa lagu dilay 9 ka tirsan Maleeshiyaadka Murtadiinta , halka lagu dhaawacay 5 kale .
Dadka lagu dilay Qaraxaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Sargaal muhiim u ahaa Murtadiinta oo darajadiisu aheyd Gaashaalle Sare kaasi oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Jiis .
Sidoo kale Qaraxa ayaa wuxuu kusoo aadayaa xilli habeen hore ay Mujaahidiinta xaafada Saybiyaano ee Magaalada Muqdisho ay ku khaarijiyeen sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaatka loogu yeero Alpha Group ee uu Maraykanku tababatay iyo 3 ka tisan ilaaladiisa.
Howlgallada kala duwan ay fulinayaan Ciidamada Mujaahidiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sii xooggeysanyay Wilaayaadka Sh Hoose, iyo Banaadir, Iyadona weeraradaasi lagu dilay ku dhawaad 30 meeyo ka tirsan Maleeshiyada Ridada ay ka mid ahaayeen Saraakiil ka tirsan Murtadiinta.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Booqashada Andalus Iyo Degmada Ceelgaras.
Next: Dhgaeyso Darsiga Labaad Sideen Kusoo Dhaweynaa Ramadaan?.